Toeram-piarovan'ny ascenseur Hydraulika, tohodran-drano, tohodrano azo ovaina, Weir Hydraulika - BIC
Ho manam-pahaizana momba ny rano iraisam-pirenena
Ny BIC dia miasa indrindra amin'ny fikarohana amin'ny sehatry ny teknika mifandraika amin'izany toy ny loharanon'ny rano sy rano any ivelany sy firenena, ny serasera, ny angovo, ny lalamby, ny injenieran'ny tanàna, ny fananganana sns.
Fanadihadiana sy famolavolana injeniera, fananganana, fanaraha-maso, fakan-kevitra ary fanombanana, fanaraha-maso sy fanaraha-maso, EPC; fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovana enjeniera vaovao, fitaovana fanaraha-maso sy rafitra mifototra amin'ny fampahalalana, fitaovana fitsaboana rano, ary fitaovana elektro-mekanika; miasa irery sy miasa ho mpandraharaha amin'ny fanafarana entana sy fanondranana karazana varotra sy teknolojia isan-karazany.
Tetikasa HED momba ny famokarana herinaratra ao Lanxi (Rubber Da ...
Shouzhou tontolo iainana ekolojika feno T ...
Fusong Ecological Managment and Restauration Pro ...
Tetikasa fanamoriana vavahady Bhara Shanka Flap
Dunhua Hydro Landscape Barrage Projet No. 1
Tetikasa tohodrano avo lenta ho an'ny rivotra Hydreo
Raha mila vahaolana indostrialy ianao dia afaka omena anao izahay.